Avatar: Momba sa manohitra ny zon’ireo Indizena? · Global Voices teny Malagasy
Avatar: Momba sa manohitra ny zon'ireo Indizena?
Nivoaka ny 28 Janoary 2010 12:06 GMT
Raha noraisin'ny maro ho hafatra manohitra ny imperialista ilay Avatar (2009), sarimihetsika feno fahaiza-mamorona mahavalalanina ny maso nataon'i James Cameron, sarimihetsika iray maminavina ny tsy misy momba ny ezaka noeritreretin'ny zanak'olombelona hananiham-bohitra planeta iray hafa mihitsy, saingy tsy tanteraka tany am-parany, ny hafa kosa miampanga ilay sarimihetsika – hany tokana nahavory haingana indrindra teo amin'ny tantaran'ny trano famoronana izany dolara an-davitrisa izany – ho miaty fanavakavaham-piaviana mitodika amin'ireo vondron'olona indizena.
Will Heaven, mpitoraka blaogin'ny Telegraph, izay mazàna no manoratra momba ny politika, ny aterineto ary ny finoana any United Kingdom, dia miampanga ilay sarimihetsika ho misy fanavakavahana ara-piaviana sy fanehoana ny fieboebon'ny fomba fiainan'ny Elatra Havia Tandrefana:
Tsy hanimba ny fahalinana akory aho, fa ity ny tena fototra fanorenana: andiana zanak'olombelona mpikarama an'ady iray no nanjanaka planeta iray tany lavitra be tany, nantsoina hoe Pandora, mba hahafahana mitrandraka harena mineraly lafo vidy hita tao aminy. Ireo “teraka tao” Pandora – karazan'ireo ranjanana, ‘aliens’ manana volon-koditra miloko manga ary nantsoina hoe Na’vi – dia monina eo ambonin'ny toerana iray voatondro ho loharanon'ilay harena. Tsy hifindra toerana izany ry zareo, noho izany dia manafika ny olombelona.
Fa ny lohahevitra faran'izay mahadikidiky indrindra ao anatin'i Avatar dia ny fandraisan'anjaran'ilay mpilalao fototra, tovolahy Amerikana iray, sembana, antsoina hoe Jake Sully, izay lalaovin'i Sam Worthington. Talohan'ny fihantsiana ady nataon'ny zanak'olombelona tamin'ireo Na’vi, nalefa tany amin'izy ireo aloha i Sully ( nasaina naka endrika avatar manana volon-koditra manga) mba ho fara-ala nenina hitady vahaolana ara-diplaomatika. Saingy, ny zava-nisy, lasa isan'izy ireo izy – ontsa tanteraka tamin'ny tarainany ka nanapa-kevitra ny hitarika azy ireo amin'ny ady ifanaovana amin'ny zanak'olombelona.
Anatin'ireo fieoeboan'ny Elatra-Havia , miavaka amin'ny rehetra kosa ity iray ity: ireo Na’vi, araka izay androsoan'ny sarimihetsika azy, dia mila ny fotsihoditra mba hamonjy azy ireo satria, amin'ny maha karazana mbola tsy nahita fivoarana azy, tsy ampy haranitan-tsaina sy risi-po ho enti-mandresy amin'ny herin'ny tenany ireo mpifanandrina aminy ry zareo. Ireo tompon-tanàna mahantra, amin'ny fomba filaza hafa, dia tsy maintsy miankin-doha amin'ingahy fotsihoditra tampom-pahaizana mba hitarika azy ireo hiala ny loza.
Thinking for You, mpitoraka blaogy izay avy any Florida, dia miaiky:
Somary nandranitra ahy ny fahitàna ny ankamaroan'ireo mpijery nanaiky ny fanaovana sariitatra mametraka ny orinasa vaventy sy ny tafika US ho toy ny fahavalo, ka nitehaka nirefodrefotra tokoa tamin'ny faharavan'ny hery mpanafika. Nefa angamba mety ho diso fandray ihany aho, satria tany amparany dia raviravy natentina ihany ilay faharesena ara-tafika, ary ny hafatra naraikitra tamin'ilay fampisehoana ho an'ny maso dia ny hoe ny hoavin'ny natiora sy ny kolontsaina dia tsy miankina fotsiny amin'ny zò, na lalàna, na koa ny hery anatiny, fa amin'ny fifandonana sy ny firotsahana an-tsehatry ny U.S. Marines Anglo-saxons lahy. Na dia orinasa voaibe iray aza ianao, na tompon-tanàna manga hoditra mahery fo iray, tsy afaka ny handresy ianao raha tsy misy ny Marines Anglo-saxons lahy miara-dàlana aminao. Ambinambin-javatra ny sisa, ary zava-poana ny fanoherana.
Eric Ribellarsi, mitoraka blaogy ao amin'ny The Fire Collective: Fight Imperialism, Rethink and Experiment, kosa tsy miombon-kevitra amin'izay:
Hitako ho misy fifandanjàna sy mahafinaritra tokoa ilay sarimihetsika izay mitantara ny dingana nodiavina miaramila iray ho an'ny imperialisma, nandeha hitsetsitra sy hamoritra firenena iray manontolo-na indizena mponina ivelan'ny tany [aliens] (ireo Na’vi), saingy nifanohitra tamin'izay, voaovan-dry zareo ary nandresy niaraka tamin'izy ireo tamin'ny ady nitam-padiana nifanaovany tamin'ny imperialisma.
Mindanaoan's Narratives, Mpitoraka blaogy Indizena, mahita ny Avatar ho toy ny “sarimihetsiky ny nofinofin'ireo mafana fo” ary mampifandray azy io amin'ny olana sedrain'ny fireneny, i Philippines:
Taratry ny ady ataon'ireo vondrom-bahoaka tantsaha indizena any amin'ny faritra lavitra andriana any Mindanao koa ilay sarimihetsika. Ny asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ireo ‘tetikasa hafa ho fampandrosoana’ dia mifanindran-dàlana foana amin'ny resaka tafika sy fanitsakitsahana zon'olombelona; fampiadiana ny lumads amin'ny samy lumads [Avy amin'ny mpandika: lumads = karazana foko monina any Philippines].
Jordan Poss Blog, monina any Amerika, fanjakan'i Georgia, dia mandray fomba fijery iray hafa:
Mahamenatra sy mahavaky fo ny fampitahàna ny Na'vi amin'ny Tompon-tany Amerikana (indiana Amerikana). Tsy hoe satria eritreretiko ho misy maha-masimasina azy kokoa ny trangam-piainana nolalovan'ireo Indiana, fa ilay sarimihetsika dia tena mampihetsi-po sy mankaloiloy koa. Ny Na'vi feno ny hatsarana rehetra ary ireo mpamoritra azy toy ny devoly tiako haloa. Tsy hoe be lazao, fa tena be moraly ilay izy. Ary dia moraly mirefarefa anefa.
Asking the Wrong Questions, blaogy Israeliana iray an'i Abigail Nussbaum, tsy mahita mihitsy an'ilay sarimihetsika hoe manana endrika mametraka ireo vahoaka indizena ho anaty tontolon'ny tantara foronina famaky anaty boky:
Rehefa nanazava tsy am-piheverana ny mpamokatra ilay sarimihetsika fa hoe ny famoahana ilay sarimihetsika momba ny zava-manana aina hafa manana volon-koditra manga [aliens] dia hanafaka ireo mpamokatra sarimihetsika rehetra amin'ny famoronana tantara mety ho tsaraina ho fanavakavahana ara-bolon-koditra raha mikasika ny olombelona no lazaina, dia tsy mahita olana amin'izay nambarany, na dia ny hany manavaka ireto avy amin'ny planeta hafa ireto amin'ireo Tompon-tany Amerikana aza dia ny volonkodiny manga monja ihany, inona no azon'ny mpitoraka blaogy anampy an'izany?
Tantaran'ny Amerika Avaratra farany
Yemen: Olona miisa 16 maty tamin'ny fanafihana ny Masoivoho Amerikana
10 Jona 2021Azia Atsimo
Sarimihetsika Indiana azo asolo: Nanaiky ihany ny handray ny fahasamihafàna ara-kolontsaina ve ny Netflix?
05 Mey 2021Azia Atsinanana
Taiwan, ‘toerana mampidi-doza indrindra eto an-tany'? Tsy izany, hoy ny Taiwaney
31 Aogositra 2015Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Ny Fitsingerenana'ny Andro Nahaterahako
24 Aogositra 2014Azia Afovoany sy Kaokazy
‘Tsy Mila Sipa Aloha, Lalao Volley ihany': Tsy Miraharaha Tolotra Mariazy Atao Aminy Ilay Kazakh Vehivavy Mpilalao Fanatanjahantena Taorian'ny Resaka Niely Be Tety Anaty Aterineto